Izicelo Zokuvimba Izingcingo Ezingafuneki ku-Android | Izindaba zamagajethi
Kusuka kumaselula amadala nangokusebenzisa amaqhinga ambalwa, ungafika kuwo vimba izingcingo ezingenayo ezivela kwinombolo ethile yoxhumana nabo, okuthile okuzoncika ikakhulu emisebenzini ethe amatheminali anakho. Uma sikhuluma ngomakhalekhukhwini we-Android, izinzuzo nezinzuzo kufanele zikhulu, noma kunjalo kufanele sazi ukuthi singakhetha kanjani uhlelo olufanele lokusisiza kulo msebenzi obalulekile.
Inkinga ingenzeka lapho umsebenzisi ethola izingcingo kanye nemiyalezo ye-SMS ebandakanya kakhulu ukuthengisa ngocingo, into okufanele ithathwe njengomsebenzi wogaxekile, ngoba thina uqobo asilucelanga lolo lwazi. Kulawa macala womabili, kule ndatshana sizoncoma ukusetshenziswa kwezinhlelo zokusebenza ezimbalwa ze-Android ongazilanda ku-Google Play Isitolo futhi lokho kuzoba nenhloso vimba lezi zingcingo ezingafuneki.
1 1. Mnu
2 2. I-NQ Call Blocker
3 3. Call Control - Call Blocker
4 4. Izingcingo Uhlu olumnyama
5 5. ObaniCall
Lokhu kungokokuqala Uhlelo lokusebenza lwe-android ukuthi sizoncoma okwamanje; inethuba lokuvimba izingcingo ezingenayo kanye nemiyalezo ye-SMS, okungenzeka ukuthi ivela kulokhu kukhangiswa kocingo ebesikhulume ngakho phambilini. Ngokuya ngocingo ngalunye, isicelo sizoba nethuba lokuthi ibika ukuthi yiziphi izinkampani eziwenzile lezi zinhlobo zezingcingo.
Akuzukuvalwa nje kuphela izingcingo ezivela ekuthengiseni ngocingo, kepha nakunombolo ethile yabantu esizobabona kahle ngokuphelele futhi okuvela kubo ngeke sifune ukuthola ucingo. Umsebenzisi unethuba lokuthola ucingo, alubambe (alwenqabe) noma alugcine ebhokisini lemeyli yezwi.
2. I-NQ Call Blocker
Uma ungathandi isicelo sangaphambilini ngesizathu esithile lapho-ke sinawe enye indlela eyengeziwe; lona esikhuluma ngaye njengamanje unethuba lokukwazi vimba inombolo ethile yezingcingo kudivayisi ephathekayo ye-Android, sisizana ukwenza kanjalo, ngokudweba uhlu olumnyama, okuzosebenza ngalo umsebenzisi wesiginali.
Njengesenzo esisheshayo, isikhathi ngasinye lapho kufika ucingo ongafuni ukuya kulo, lungamukelwa futhi lungahlulwauzophendulwa ngomyalezo ozenzekelayo we-SMS. Lolu hlelo lokusebenza lwe-Android futhi lunamandla okuvimba imiyalezo ye-SMS engabhekwa njengogaxekile. Kusukela ekucushweni kwethuluzi, ungasusa masinyane wonke umlando wezingcingo ezingenayo futhi ikakhulukazi lezo ezinqatshiwe.
Ngokwemibiko eminingi, le yi Uhlelo lokusebenza lwe-android esetshenziswa kakhulu okwamanje, ngokuba yisampula yalokhu abasebenzisi abayizigidi ezinhlanu abathathe isinqumo sokuyisebenzisela yona vimba zombili izingcingo, imiyalezo ye-SMS.
Umnikazi weselula unethuba lokwenza i-terminal, kukhala kuphela lapho eyifuna; Kukhona futhi ithuba lokuvimba umphakathi othile othize, ongakhonjwa, njengalowo othumela imiyalezo yokukhangisa ngobuningi. Ngaphansi kwalesi simo, uhlelo lwe-Android luzoba nethuba lokuvimba izinkulungwane zabantu ngokushesha, zibabeka bonke njengalabo abasuselwe ogaxekile.
4. Izingcingo Uhlu olumnyama
Uthembele kusihlungi esikhethekile, lolu hlelo lokusebenza lwe-android inamandla okuvimba imilayezo ye-SMS kanye nezingcingo ezingafuneki.
Ngaphezu kokuncika ku "uhlu lwabamnyama" loxhumana nabo ukuvimba, isicelo sizokusiza futhi ukuba wenze le block efanayo nanoma ngubani oyingxenye yohlu lwakho uma ufisa. Njalo lapho ucingo lungena luvela kunoma ibaphi oxhumana nabo abasohlwini olumnyama, umakhalekhukhwini ngeke nje ukhale, le kholi iya kunganakwa ngakho-ke, ayitholwa noma nini.
Indlela esebenza ngayo lolu hlelo lokusebenza lwe-android kuyinto ethakazelisa kakhulu, ngoba incike ekuxhumekeni kwayo kwe-Intanethi. Lapho kungena ucingo (oluhambisana nohlobo oluthile lokuthengisa ngocingo), kuyafana izohlaziywa ngokushesha kuwebhu, okwenza ukuthi ivinjwe ngaleso sikhathi uma ibonwa njengomsebenzi wogaxekile.
Ucingo ngalunye oluye lwabhaliswa nalolu hlelo (njengogaxekile) lungabuyekezwa kamuva ngumnikazi weselula, owathi nquma ukuthi uzolubuyisa noma cha ucingo.
Ngalezi ezinye izindlela ezi-5 esiziphakamisile, uzokwazi ukuqala phila impilo ethule engenayo imilayezo ye-SMS nokushaya izingcingo ngogaxekile, ngaleyo ndlela kugwenywe ukukhwabanisa kocingo okungenzeka ukuthi namuhla kukhuliswe kakhulu ngenxa yalolu hlobo lomsebenzi owenziwa izinkampani ezithile ezingethembeki kangako.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » I-Telephony » AmaSelula » 5 Izinhlelo Zokuvimba Izingcingo Ezingafuneki ku-Android
Ukubizelwa abamnyama kusho
Sawubona, Kusuka ePamiesolutions sethula iBlacklistcall: uhlelo lokusebenza lapho uzoba nazo zonke izilungiselelo zokuvinjelwa ezisendaweni eyodwa futhi ungavimba ngokushesha izinombolo bese uzithulisa ngokuzenzakalela. Ibuye ibe nokuvimba okuzenzakalelayo okuvimba izinombolo abanye abasebenzisi abazibone njengezinombolo ze-SPAM ezicasulayo. Faka mahhala ku: https://play.google.com/store/apps/details?id=pamiesolutions.blacklistcall